संस्मरण – Hatuwa Herald
शिखर पुरुष ईबरा सरलाई सम्झँदा
हतुवा हेराल्ड २२ माघ २०७६, बुधबार February 5, 2020 संस्मरण	0
✍ सुमित्रा अविरल ६ मार्च २०१८ भारतिय नेपाली साहित्य अथवा विश्व नेपाली साहित्यमा नै एउटा सुर्य ग्रहण अर्थात् कालो दिन र रातो थियो । बेलुकी खाना खाएपछि ओछ्यानमा पसेर मोबाइल समाएर सामाजिक सञ्जाल हेर्दै पढ्दै थिँए , अचानक एउटा पोस्ट आयो " ईबरा अस्ताए " म तर्सिएँ , फेरी होइन होला जस्तो लाग्यो र फेरी निरन्तर सञ्जाल हेर्न थालेँ, तर एकाएक नेपाली साहित्यलाई गहिरो खति , हार्दिक श्रद्धाञ्जली , शोक प्रकट , थरी थरीका पोस्टहरू आउन थाले । यस पल्ट भने पुर्ण विश्वास भयो साँच्चै ईबरा अस्ताएका रहेछन । फेरी मैले संकल्प दिदीलाई कल गरेँ अनि
अरुण आकाश कुरा केही दिन अगाडिको मात्र हो। नेपालीहरुको साझा पर्ब बडादशैँ २०७६ मनाउन गाउँ जाने क्रममा २०७६ असोज १६ गते इटहरी सुनसरी बाट परिवारका अन्य सदस्यहरु श्रीमती, छोरा, छोरी,भाइ बुहारी, भतिज, गाउँकै एकजना अजि(हजुर आमा) संगै धरान पानी ट्याङकि (चतरालाईन) गयौँ । जहाँ बाट हतुवागढी भोजपुरको लागि हतुवागढी यातायात सेवा प्रा.लि.ले धनकुटाको अखुवाटार सम्मको लागि ट्याक्सीको सेवा प्रदान गर्दछ। त्यही नेर अनन्य मित्र इन्द्र थापा संग भेट भएर संगै जाने सल्लाह अनुसार भेट भयौं । इन्द्र थापालाई बिदाई गर्न अर्का अनन्य मित्र केशर तुम्छा पनि आउनु भएको थियो । दशैँको चटारो बिहानको ७ बजे देखिको ट्याक्सी पर्खाई बल्ल दिउसोको ३
बुद्धिसागर सपना बोकेर काठमाडौं आउनेहरूको बाटो नयाँ बसपार्क, महारागन्ज हुँदै रत्नपार्क पुग्छ । वषौं टुँडिखेललाई फन्का लगाउँछ र एनएसीबाट बस चढेर जमल हुँदै नयाँ बसपार्क पुग्छ । र, घर फर्किन्छ । यो बीचमा सबैले केही गुमाउँछन्, केही पाउँछन् । फर्किनेहरू आफैं फर्किदैनन् । उनीहरूलाई गाउँ सम्झाउन आकाश मुलायम हुँदै जान्छ । उडिरहेका पंक्षीहरू टाढा–टाढासम्म देखिन्छन् । बादलको स–साना टुक्राहरू खरायोझैं मधुरो कम्पन दिएर आकाशतिर डुलिरहन्छन् । उराठपन बोकेर बतास स्मृतिका झ्यालढोका ढकढकाउन आइपुग्छ । एउटा मोबाइलबाट उड्दै उड्दै आएको आवाज अर्को मोबाइलसम्म पुग्छ । आकाशभरि नदेखिने तर पंक्षीका झुण्डभन्दा धेरै आवाजहरू उडिरहन्छन् । कति थाकेका आवाजलाई चंगाले पनि बोक्दो होला ! नयाँ बसपार्कमा टिकट बुक गर्नेको
हतुवा हेराल्ड १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार June 19, 2019 संस्मरण	0
-बुद्धिसागर सानोमा स्कुल छाडेर भागेको। मोजाको फुटवल बनाएर खेलेको। खोलामा नाँगै नुहाएको। सरले मुर्गा बनाएर घाममा उभ्याएको। पहिलोपल्ट फिलिम हेरेको। घरमा आमाले पकाएको रारा चाउचाउ गड्यौलाजस्तो लागेर घिन मान्दै नखाएको। अस्ति भर्खरैजस्तो लाग्छ। समय त मिलको पट्टा पो रैछ। फनफनी घुमेको घुम्यै गर्छ। भन्छन् – खुशीमा समय चाडै बितेजस्तो लाग्छ। दुख्खमा समय एकैठाऊँमा अडेको अड्यैजस्तो हुन्छ। सम्झना छ? परिक्षा हलमा एकघन्टा कति छिटो बित्छ? हेरिरहेको फिलिम कत्ति चाँडै सकिन्छ? तर, बिचबिचमा आउने विज्ञापन कत्ति लामो लाग्छ। मनपर्ने सरको कक्षा कत्ति छोटो लाग्छ र मन नपर्ने सरको कक्षा कत्ति लामो। समय र उमेरपनि त्यस्तै त हो। म सोचिरहेको छु- मेरो जीवनको ३५ बर्ष मनपर्ने सरको क्लासझैँ कत्ति
शकुन आँशु यो हप्ता शनिबार देखि नै बिदा थियो । शुक्रबार छिटै छुट्टि भएपनि जानु कतै थिएन, गैएन । कोठामै बसियो, अाईतबारको लागि पुर्णरुपमा तयार पार्नु थियो अाफुलाई । अाईतबार अर्थात् कोरियामा 'साईली' फिल्म प्रदर्शन हुने दिन । शनिबार केहि साथीहरुसङग मेसेन्जरमा कुरा गरेँ, भोलि 'साईली' हेर्नु अाउनु, भेटौँ भन्ने निम्तो बाँडेकी थिएँ । जसभित्र कवि बोनम प्रताप मल्ल पनि हुनुन्थ्यो । तोङदेमुन अाउने तर साथीको बिहेमा सहभागि हुने कुरा बताउनुभयो । समय रहे सङगै फिल्म हेर्ने सम्भावना सम्म पुग्यौँ र छुट्टियौँ । अाईतबार बिहान १०:३० हुँदो हो, सौलको तोङदेमुन यात्रा सुरु भयो । म र एकजना साथी, जस्लाई सङबु यग बाट
“साइँली” ले जुराएको संयोग
हतुवा हेराल्ड ९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार May 25, 2019 ब्लग, संस्मरण	0
दीपा मेवाहाङ् राई अरु बेला बिहान ७:५०को आर्लम सेभ गरे पनि आइतबार अर्थात मे १२ मा ७:१५ को सेभ गरेको थिए। अघिल्लो रात नै ताकी महिना दिन अघी बाट प्रतीक्षा गरेको नेपालि फिल्म साइली नछुटोस भनेर। राती कति पटक त बिउझिन्दै मोबाइल हेर्दै सुतेँ, कतै अर्लाम बजेर पनि मैले निन्द्रामा थाहा पाइनँ कि भनेर? उठेर फ्रेस भैइ रेडि हुदा लगभग ८ बजिसकेको थियो। कुनै चाडपर्व झैँ दराजबाट अस्ति भर्खरै किनेको नयाँ लुगा निकालेर लगाई बस स्टप पुगेँ। अरु बेला १०/१० मिनेटको अन्तरालमा छुट्ने बस बिदाको दिन १५/२० मिनेटमा मात्र आउँछ। म आउनु थोरै समय अगाडि छुटेको थियो सायद बस र त १०
दीपा मेवाहाङ् राई	Read More